Nhau - Disinfectant pukuta
Denda iri richiri kuenderera mberi. Iyi ihondo umo munhu wese ari kutora chikamu asi hapana pfuti. Pamusoro pekutsigira mutsetse wepamberi nepavanogona napo, vanhuwo zvavo vanofanira kuzvidzivirira uye kudzivirira hutachiona, kudzivirira denda kuti rirege kuitika kwavari, uye kwete kukonzera nyonganiso.
Kune parizvino nzira nhatu dzinozivikanwa dzekutapurirana kwebhakitiriya: muromo wemvura, madonhwe uye kufambisa kuonana. Iwo maviri ekutanga anogona kunyatsovharidzirwa nekupfeka mamask uye magogogi, asi chinonyanya kufuratirwa ndiko kutapurirana kwekutaurirana!
Kuti udzivise kupararira kwehutachiona zvisina kujeka, kugeza maoko ako nguva zhinji, kuisa utachiona, uye kuisa utachiona zvinhu zvaunofanira kubata ndiyo nzira inoshanda yekudzivirira.
Sekureva kwaAcademician Li Lanjuan, nhengo yeboka repamusoro rehunyanzvi reNational Health Commission, 75% ethanol disinfection inogona kubvisa hutachiona huripo. Iyo nyowani coronavirus inotya doro uye haina kupokana neepamusoro tembiricha.
Naizvozvo, zvinodikanwa kushandisa 75% doro kunwisa mishonga nzvimbo dzinoda kubatwa zuva nezuva! Nei 75% yevasungwa ichidikanwa? Sayenzi inozivikanwa:
Izvi zvinodaro nekuti doro rakanyanya kukwirisa rinoita firimu rekudzivirira pamusoro pebhakitiriya, kuchidzivirira kupinda mumuviri webhakitiriya, uye zvinonetsa kuuraya hutachiona zvachose.
Kana iko kunwa doro kwakadzikira, kunyangwe kuchikwanisa kupinda mabhakitiriya, hakugone kuumbiridza protein mumuviri, uye hakugone kuuraya hutachiona zvachose.
Ongororo dzakaratidza kuti 75% doro ine zvainoita, kwete kana zvishoma!
Ita zuva nezuva anti-hutachiona basa! pfungwa iyi inokosha zvikuru!
Nhasi, mupepeti anokurudzira chigadzirwa chezuva nezuva chehuswa hwehutachiona kumunhu wese-—
Kuuraya hutachiona makapu ane 75% doro.
Iyi doro unopukuta haigone chete kutadzisa iyo nyowani coronavirus, asi zvakare inobatsira kune pathogenic mabhakitiriya akadai E. coli uye Candida albicans!
Kwete chete iyo inoshandisa 75% doro, asi kunyangwe iyo mvura inoshandiswa yarapwa kakawanda uye inogona kuomeswa mumuviri!
Sekureva kweSenzhen Health Commission, muna Kukadzi 1, iyo Institute of Chiropa Zvirwere, Shenzhen Third People's Hospital yakaona kuti chigaro chevamwe varwere vane pneumonia vakatapukirwa nerudzi rutsva rwecoronavirus chakaedza hutachiona hwemhando nyowani yecoronavirus. Panogona kuve nehutachiona hwehupenyu mutsipa wemurwere.
Naizvozvo, iwe unofanirwa zvakare kutarisisa kutapukirwa paunoenda kuchimbuzi. Uku kupukuta doro kunogona kunyatso pukuta mabhakitiriya ayo asingakwanise kubvisa mapepa ekuchimbuzi, inova zvakare nzira yekudzivirira!
Mune mamwe mazwi, pamusoro pekupfeka mamask ekudzivirira madonhwe, tinofanirwa kungwarira kuti hutachiona hunowanikwa mumaoko, kukwiza maziso edu, kunhonga mhino, nekubata muromo kukonzera hutachiona nekupararira.
Kana tikadzoka kubva kunze, kunyangwe isu tichipfeka mamask, zvipfeko zvedu nevhudzi zvichiri kusvibiswa nehutachiona. Munguva yedenda, zvakanaka kudzoka kubva kumba. Muviri wese unogona kushandurwa, kuwachwa, uye zvese nemishonga inourayiwa utachiona.
Kunyanya maoko edu, tinofanira kushambidza maoko edu kazhinji!
Iyi ipfungwa iyo 90% yevanhu vanokanganwa nyore nyore;
Pakati pemazano akapihwa neWorld Health Organisation pamusoro pekudzivirirwa kwekononavirus nyowani, yekutanga kugeza maoko.
Chekupedzisira, ndinoshuvira nyika kuti ikurumidze kudzoka kune kuchengetedzeka uye hutano.